Maxkamadaha Dadku Waxay Noqon Kartaa Hab Wax Ku ool Ah Oo Lagula Dagaalamo Islaam Nacaybka Mareykanka | Somalisan.com
Home Afsomali Maxkamadaha Dadku Waxay Noqon Kartaa Hab Wax Ku ool Ah Oo Lagula...
Maxkamadaha Dadku Waxay Noqon Kartaa Hab Wax Ku ool Ah Oo Lagula Dagaalamo Islaam Nacaybka Mareykanka
Nidaamka ugu aqbalsan ee lagu fulin karo mas’uuliyadda wuxuu noqon karaa maxkamadaha dadka, oo dhowr jeer xaqiijiyey waxtarkooda kiisaska la xiriira ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Islaam nacaybka iyo cunsuriyaddu waxay ahaayeen mabaadi’da hagaya barnaamijka doorashada, taas oo ay ugu mahadnaqday Donald Trump oo awood u yeeshay inuu noqdo Madaxweynaha Mareykanka. Hadafka Joe Biden waa inuu ka tago mabaadi’daas. Gaar ahaan, markuu xukunka la wareegay, madaxa cusub ee Aqalka Cad wuxuu ka qaaday waxa loogu yeero “mamnuucida muslimiinta”, taasoo ku kaliftay in badan oo raacsan diinta Islaamka takoor aan qiil lahayn Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay khubarada, tallaabooyinka noocan oo kale ah ee maamulka Mareykanka uma badna inay si dhakhso leh u saxaan xaaladda. Muslimiinta ku nool Mareykanka ayaa wali la kulmaya takoor daran.
Waxaa xusid mudan in gabi ahaanba aysan ku filnayn in si fudud loo tirtiro mamnuucyada jira ee salka ku haya arrimo diimeed. Waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro cunaqabateyn adag oo la saarayo dadka, kuwaas oo wakiilladooda ay tahay inay si cad u ogaadaan inay jirto mas’uuliyadda ku tumashada xuquuqda Muslimiinta. Gaar ahaan, qaabka ugu aqbalsan ee loo fulin karo mas’uuliyadda wuxuu noqon karaa maxkamadaha dadka, oo dhowr jeer xaqiijiyey waxtarkooda kiisaska la xiriira ilaalinta xuquuqda aadanaha. Intaas waxaa sii dheer, hay’adaha dowladda waxaa guud ahaan lagu qasbay inay dhageystaan ​​maxkamadaha dadka iyagoo ka baqaya qalalaase bulsho.
Donald Trump ma takoorin karin Muslimiinta Mareykanka go’aanadiisa kaligiis. Hirgelinta go’aamada noocan oo kale ah waxay noqotay suurta galnimada kaliya iyadoo ay ugu wacan tahay dhammaan nidaamka dowladda iyo xiriirka bulshada
kaliya waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in dhammaan nidaamka dowladnimada iyo xiriirka bulshada uu ku dhex milmay Islaam naceybka. Markii uu soo saaray “mamnuucida muslimiinta,” Madaxweynaha Mareykanka wuxuu kaliya keenay sharciyo ka dhan ah diinta Islaamka, oo in muddo ah lagu dabaqi jiray bulshada Mareykanka, heer rasmi ah.Natiijo ahaan, bishii Diseembar 2017, Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in “mamnuucidda muslimiinta” la caddeyn karo lana fulin karo, xitaa haddii wakiillada bulshada Muslimiinta ay racfaan ka qaataan garsoorka ka soo horjeedka go’aanka noocaas ah. Dhamaadkii sharciga wuxuu ahaa xukunkii 26-kii Juun, 2018 ee Maxkamadda Sare ee Mareykanka, oo ku saabsanayd in Donald Trump uu helay xuquuq aan xad lahayn oo ah takooridda Muslimiinta.Marka, maxkamadaha dadka ee kiisaska ku lug leh muujinta Islaam nacaybka waxay noqon karaan kuwo go’aan leh, marka hore, maxaa yeelay inta badan muwaadiniintu way ku kalsoonaan doonaan maxkamadaha noocaas ah, marka labaadna, tani waxay si weyn u yareyn doontaa culeyska saaran nidaamka caddaaladda ee dowladda, maadaama khilaafaadka ugu badan “Islaam naceyb” ay runti waa in lagu xaliyaa heerka tijaabada kahor.In kasta oo xaqiiqda ah in maxkamadaha dadka laga reebay nidaamka garsoorka rasmiga ah ee Mareykanka, haddana, haddana, waxay si weyn u yareyn doonaan “kuleylka kiisaska” ee ay keeneen caburinta muwaadiniinta ee ku saleysan diintooda. Intaas waxaa sii dheer, go’aamada ay gaaraan maxkamadaha dadka ayaa markaa kadib la isticmaali karaa marka la tixgalinayo kiisaska maxkamadaha awooda guud iyo xarumaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah.
Iyada oo taa laga duulayo, Islaam nacaybka Mareykanka wuxuu noqon karaa mowduuc ay si dhow isha ugu hayaan maxkamadaha dadka, taas oo, iyaduna, u adeegi doonta hab wax ku ool ah oo lagula dagaallamo cawaaqibka xun ee siyaasadaha Donald Trump.
Previous articleCabdulaahi Xasan Shiqaalow oo Cali yare ku tilmaamay masuul la mahadiyey oo aan barasho horteed la nici karin
Next articleFARIIN KU SOCOTA CULIMADA UMADA SOOMAALIYEED W/Q:Abwaan Cabdi Kariim M.Cadde(Qaamuus)
Dagaal qasaare geystay oo ka dhacay Gololey oo u dhow Dagmada balcad
Farmaajo oo kormeeray Dugsiga Tababarka Militariga ee Kambaala(DAAWO SAWIRADA)